Nnwom 38 NA-TWI - Ɔmanehunufo mpaebɔ - O Awurade, ntwe - Bible Gateway
Nnwom 37Nnwom 39
Nnwom 38 Nkwa Asem (NA-TWI)
38 O Awurade, ntwe m’aso wɔ w’abufuw mu! 2 Wode w’agyan apira me. Woabɔ me ahwe fam. 3 W’abufuw no nti mewɔ yaw a ano yɛ den mu. Me bɔne nti, ɔyare adidi me honam nyinaa. 4 Me bɔne reyiri fa me; ɛyɛ adesoa a emu yɛ me duru. 5 Esiane sɛ magyimi nti, m’akuru bɔn na ɛreporɔw. 6 Makotow ma wɔabubu me. Mitwa agyaadwo daa nyinaa. 7 Atiridii rekum me. Mereyɛ awu. 8 Mabrɛ a mapɛkyɛw koraa. Me koma redi yaw na yaw ama merepene.